‘बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव’ – Banking Khabar
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७३÷०९÷१४ को निर्णयअनुसार बिगत १ बर्षदेखि समितिको नेतृत्वमा रही कार्य गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवधिमा बीमा क्षेत्रसँग साक्षात्कार गर्ने र बुझ्ने मात्र नभई यो क्षेत्रको दीगो विकास र सुब्यवस्था कायम गर्न दीर्घकालीन महत्व राख्ने केहि कार्यहरु सम्पन्न भईसकेका छन् भने केही कार्य शुरुवात भएका छन् । विगत एक बर्षको अवधिमा समितिबाट भएका केही मुख्य कार्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ः
बिगत लामो समयदेखि कम्पनीहरुको चुक्ता पँुजीलाई समय सापेक्ष रुपमा बृद्घि गर्न सकिएको थिएन । तत्कालीन समयमा जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पँुजी रु. ५० करोड र निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पँुजी रु. २५ करोड रहेको छ । यसलाई ४ गुणा बृद्घि गरी हाल जीवन बीमा कम्पनीको रु. २ अर्व र निर्जीवन बीमा कम्पनीको रु. १ अर्व कायम गरिएको छ । सोल्भेन्सी मार्जिन र नेट वर्थमा बृद्घि भई धारणा (रिटेन्सन) क्षमतामा पनि बृद्घि हुन पुगेको छ भने सर्वसाधारणमाकम्पनी प्रतिको बिश्वसनियता पनि बृद्घि हुँदै गएको देखिएको छ ।